InDesign टेम्प्लेटहरू: टेम्प्लेटहरू फेला पार्नका लागि उत्तम वेब पृष्ठहरू | क्रिएटिभ अनलाइन
अघिल्लो किस्ताहरूमा, हामीले तपाइँसँग कुरा गर्यौं InDesign। यो एक कार्यक्रम मात्र होइन जहाँ विभिन्न उपकरणहरू प्रशस्त छन्, तर यसको श्रृंखला पनि छ टेम्प्लेट जुन आधारबाट आउँछ र यसले तपाइँलाई तपाइँको परियोजनाहरूमा राम्रो काम गर्न मद्दत गर्दछ।
यस पोस्टमा, हामी तपाईंलाई InDesign टेम्प्लेटहरूको संसारमा परिचय गराउनेछौं। हामी तपाईलाई कुन टेम्प्लेटहरू सधैँ प्रयोग गर्ने र विशेष गरी तिनीहरू कहाँ छन्, नि:शुल्क र सशुल्क दुवै रूपमा प्रयोग गर्ने सल्लाह दिनेछौं।
हामीसँग रहनुहोस् र यस उपकरणको बारेमा धेरै कुरा पत्ता लगाउनुहोस् जसले को क्षेत्रमा ठूलो सफलताहरू प्रदान गर्दछ ग्राफिक डिजाइन.
1.1 टेम्प्लेटका प्रकारहरू
1.1.1 रेट्रो पत्रिका टेम्प्लेटहरू
1.1.2 इलेक्ट्रोनिक टेम्प्लेटहरू
1.1.3 न्यूनतम टेम्प्लेटहरू
1.1.4 यात्रा टेम्प्लेटहरू
1.1.5 बहुउद्देश्यीय टेम्प्लेटहरू
2 InDesign टेम्प्लेट साइटहरू
2.1 स्टक InDesign
2.2 सर्वश्रेष्ठ InDesign टेम्पलेट्स
2.4 पृष्ठ मा अंक लगान
2.5 InDesign गोप्य
2.7 स्टक लेआउटहरू
3.1 डिजाइन मा लेआउट
जब हामी टेम्प्लेटहरूको बारेमा कुरा गर्छौं, हाम्रो मतलब ए मास्टर पृष्ठ, त्यो हो, एउटा कागजात जसले सबै जानकारी सङ्कलन गर्दछ र यसलाई हामीले चाहे अनुसार व्यवस्थित गर्दछ। टेम्प्लेटहरूaबाट उत्पन्न हुन्छ नयाँ कागजात, र परियोजनाहरू तयार गर्दा तिनीहरू धेरै उपयोगी हुन सक्छन्, किनकि तिनीहरूमध्ये केही पाठहरू र छवि राख्नको लागि गाइडहरूका साथ पूर्वनिर्धारित हुन्छन् ताकि छविको अगाडि पाठहरूको पदानुक्रममा एक निश्चित संगत हुन्छ,
त्यहाँ धेरै प्रकारका टेम्प्लेटहरू छन्, तिनीहरू कसरी अवस्थित छन् भन्ने आधारमा, एक निश्चित प्रकार्य छ र त्यो मूलको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको छ। यहाँ अवस्थित टेम्प्लेटको प्रत्येक प्रकारका केही उदाहरणहरू छन्।
रेट्रो पत्रिका टेम्प्लेटहरू
पुरानो प्रिन्ट शैलीहरू धेरै श्रमसाध्य र रचनात्मक हुन सक्छ। ढाँचाहरू, पुरानो-विद्यालय बनावटहरू, र म्युट गरिएको रङ प्यालेट तयार गर्न समय लाग्न सक्छ। यस प्रकारको InDesign टेम्प्लेट थप पुरानो शैली भएका पत्रिकाहरूका लागि, पहिले नै प्रामाणिक शैलीको रंग र बनावटको साथ आउँदछ। रेट्रो डिजाइन। परिणाम सामान्यतया धेरै चापलूसी हुन्छ, विशेष गरी जसरी अल्ट्रा-आधुनिक र पुरानो शैली एक सुरुचिपूर्ण डिजाइनमा संयुक्त हुन्छ।
InDesign प्रिन्ट लेआउटहरू सिर्जना गर्न मात्र डिजाइन गरिएको होइन, यो पनि हो? डिजिटल डिजाइनहरू सिर्जना गर्न पूर्ण रूपमा कन्फिगर गरिएको। यस प्रकारको पत्रिका टेम्प्लेटहरू, वा इलेक्ट्रोनिक प्रकाशन समर्थन गर्दछ, तपाईंलाई फाइलको रूपमा आफ्नो परियोजनाहरू निर्यात गर्न अनुमति दिन्छ EPUB, डेस्कटप कम्प्युटर र ह्यान्डहेल्ड उपकरणहरूमा हेर्नको लागि तयार छ।
InDesign मा सम्पादन गर्न मिल्ने मिनिमलिस्ट म्यागजिन टेम्प्लेटहरू प्रभाव पार्नको लागि आकर्षक हुनु आवश्यक छैन। तिनीहरू फेसन, जीवनशैली वा यात्रा जस्ता विधाहरूको विस्तृत दायरा अनुरूप छन्। यो टेम्प्लेटले तपाईंलाई सुन्दर तस्बिरहरू साथै सफा र समकालीन टाइपफेसहरू प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ।
यदि तपाइँ केहि चीज खोज्दै हुनुहुन्छ जुन अलि बढी प्रभावशाली र चाखलाग्दो छ, यो प्रकारको यात्रा पत्रिका टेम्प्लेट उच्च भोल्टेज रंग र एक शक्तिशाली मिश्रणको लागि आशावादी डिजाइन संयोजन गर्ने उत्कृष्ट उदाहरण हो जुन तपाइँ कब्जा गर्न निश्चित हुनुहुन्छ? पाठकहरूको ध्यान। यो अन्य विषयहरूमा पनि राम्रोसँग उपयुक्त छ जुन सेलिब्रेटी समाचार वा खाना पकाउने जस्ता आकर्षक फोकसहरूमा फिट हुन्छ।
बहुउद्देश्यीय टेम्प्लेटहरूको समकालीन शैली छ जसले मनमोहक छविहरूलाई उत्कृष्ट sans-serif टाइपफेससँग मिलाउँछ। यदि तपाईंले आफ्नो पत्रिकालाई स्क्र्याचबाट सुरु गर्नुभयो भने स्प्रेडसिटका लागि पृष्ठ लेआउटहरू मास्टर गर्न गाह्रो हुन सक्छ। त्यो टेम्प्लेटहरू यो मेहनती कार्य सुरु गर्न उत्कृष्ट छन्।
तपाईले देख्नु भएको होला, प्रत्येक टेम्प्लेट फरक प्रकारको पत्रिका वा प्रकाशन माध्यमको लागि डिजाइन गरिएको हो। यो जान्न अविश्वसनीय छ, हाम्रो शैली र हामीले हाम्रो परियोजना कसरी काम गर्छौं भन्ने आधारमा, त्यहाँ सधैं एउटा टेम्प्लेट हुनेछ जुन हामीलाई उपयुक्त हुन्छ।
यहाँ केहि पृष्ठहरू छन् जहाँ तपाइँ यी प्रकारका टेम्प्लेटहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ, या त सशुल्क वा निःशुल्क, तर सधैं तिनीहरूसँग।
InDesign टेम्प्लेट साइटहरू
स्टक InDesign, डिजाइन टेम्प्लेट को एक विस्तृत विविधता संग एक पृष्ठ हो अनलाइन मुद्रण: पुस्तकहरू, ब्रोसरहरू, फ्लायरहरू, क्याटलगहरू र पत्रिकाहरू। यद्यपि, तिनीहरूले ती मध्ये5मात्र निःशुल्क डाउनलोडको साथ प्रस्ताव गर्छन्। यसका बावजुद, तिनीहरू अन्वेषण गर्न लायक छन् किनकि तपाईले एक क्लिकमा तपाईलाई चाहिने सबै कुरा पाउन सक्नुहुन्छ।
यस पृष्ठमा सशुल्क टेम्प्लेटहरू छन्, तर यसले InDesign टेम्प्लेटहरू निःशुल्क डाउनलोड गर्ने क्षमता पनि प्रदान गर्दछ। तपाईंले तिनीहरूलाई ब्रोशरहरू, फ्लायरहरू वा ब्रोशरहरू, रिपोर्टहरू, रिजुमहरू, पत्रिकाहरू, क्याटलगहरू, क्रिसमस कार्डहरू, आदिका लागि फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
तिनीहरूमध्ये प्रत्येकसँग फन्टहरू, रङहरू, आकारहरू, छविहरू र अन्य तत्वहरूका साथै आवश्यक कागजातहरू र प्रत्येक विशिष्ट केसमा प्रयोग गरिएका नि: शुल्क फन्टहरूको लिङ्कहरूका लागि यसको विशिष्टताहरू छन्।
यदि तपाइँ ग्राफिक डिजाइन टेम्प्लेटहरू डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ पहिले तिनीहरूलाई साझा गर्न र प्रदर्शन गरिएका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूको आइकनहरू मध्ये कुनै एकमा क्लिक गर्नुहोस्, वा टेम्प्लेटहरूको लिङ्क अनब्लक हुनको लागि लगभग2मिनेट पर्खनुहोस्।
यस अद्भुत वेबसाइटमा, तपाईंसँग हजारौं टेम्प्लेटहरू उपलब्ध छन् ग्राफिक डिजाइन नि: शुल्क (व्यापार कार्डहरू, उडानहरू, क्याटलगहरू, जुन तपाइँ चाहनुहुन्छ)। तपाईले नेभिगेसन मेनुमा फाईलको प्रकार, उत्पादन, पेशा र क्षेत्र अनुसार टेम्प्लेटहरू खोज्न सक्नुहुन्छ।
तिनीहरूका डिजाइनहरू सरल र कर्पोरेटमा बढी हुन्छन्, यदि तपाईं यो शैली खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले पक्कै पनि यसलाई मन पराउनुहुनेछ। टेम्प्लेटहरू डाउनलोड गर्न तपाईंलाई एउटा खाता चाहिन्छ, र नि: शुल्क योजनाको साथ तपाईंले प्रति दिन3नि: शुल्क टेम्प्लेटहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
पृष्ठांकन एक डाटा फाइलबाट सुरु गरी मिनेटको मामिलामा लेआउट कागजातहरू सिर्जना गर्न उत्कृष्ट पृष्ठ हो। तिनीहरू उच्च-गुणस्तरको सम्पादकीय डिजाइन टेम्प्लेटहरू हुन्।
यदि तपाइँ यो उपकरण प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँले तपाइँको सामग्री अपलोड गर्न आवश्यक छ र उही कार्यक्रमले तपाइँको लागि कागजात मकअप गर्दछ। तर तिनीहरू Adobe InDesign र यसको प्रकाशन कार्यक्रमको साथ प्रयोगको लागि मात्र उपलब्ध छन् (नि:शुल्क टेम्प्लेटहरू)।
यो पृष्ठ Adobe कम्पनी द्वारा होस्ट गरिएको हो। यदि तपाईंले तिनीहरूको वेबसाइट ब्राउज गर्नुभयो भने (InDesign Secrets को) तपाईंले डिजाइनरको रूपमा तपाईंको कामलाई सहज बनाउने धेरै स्रोतहरू फेला पार्नुहुनेछ; तपाईं मात्र उपलब्ध छैन ग्राफिक डिजाइन टेम्प्लेटहरू, ट्यूटोरियलहरू, भिडियोहरू, पोडकास्टहरू र घटनाहरू पनि।
यसले यसको वेबसाइटमा मात्र नि:शुल्क र सशुल्क टेम्प्लेटहरू प्रदान गर्दछ, पछिल्लो वार्षिक सदस्यताको साथ। त्यहाँ अन्य साइटहरू छन्, जस्तै रचनात्मक बजार, जहाँ तपाइँ स्वतन्त्र डिजाइनर र स्टुडियोहरू द्वारा सिर्जना गरिएका सयौं र हजारौं निःशुल्क डिजाइन टेम्प्लेटहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ, जसले शुरुआती डिजाइनरलाई मद्दत गर्ने कार्यमा लिएका छन्।
Unblast आधुनिक र गुणस्तर मुक्त टेम्प्लेटहरू प्राप्त गर्न एक उत्तम पृष्ठ हो। तपाईंले भर्खरै डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र यसले तपाईंलाई पृष्ठमा रिडिरेक्ट गर्नेछ जहाँ तपाईंले रोज्नुभएको टेम्प्लेटको प्रत्यक्ष डाउनलोड हो। तपाईका सबै कार्यहरू सही रूपमा डिजाइन गरिनेछ, लिनको लागि तयार छ अनलाइन मुद्रण.
यी ग्राफिक डिजाइन टेम्प्लेटहरू प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छन्, साथै आधुनिक र व्यावसायिक। तिनीहरू विभिन्न प्रकाशन कार्यक्रमहरूको लागि उपलब्ध छन् (क्वार्कएक्सप्रेस, एप्पल पृष्ठहरू वा माइक्रोसफ्ट अफिस) र अन्य समर्थित ढाँचाहरूमा।
त्यहाँ धेरै विविधता नहुन सक्छ, तर तिनीहरूले प्रस्ताव गरेको कुरा निस्सन्देह उत्कृष्ट गुणस्तर र व्यावसायिकताको छ। सरलता कहिल्यै राम्रो प्रतिनिधित्व गर्दैन। यो एक पृष्ठ हो जहाँ सरल सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा छ, त्यो हो, जहाँ तपाइँको शैली फेला पार्न तपाइँ सोच्नु भन्दा सजिलो हुन सक्छ।
यो उत्तम InDesign टेम्प्लेटहरू जस्तै पृष्ठहरू मध्ये एक हो। Pixeden नि: शुल्क डाउनलोड संग प्रीमियम भुक्तान टेम्प्लेट संयोजन गर्दछ। चाखलाग्दो कुरा यो हो कि भुक्तान टेम्प्लेटहरूमा सुपर प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू छन्।
यस प्रकारका टेम्प्लेटहरू कहाँ प्राप्त गर्ने भनेर केही राम्रा वेबसाइटहरू थाहा पाएपछि, तपाइँलाई थाहा हुनुपर्दछ कि तिनीहरू सम्पादकीय प्रकृतिको लेआउट परियोजनाहरूको उद्देश्यका साथ डिजाइन गरिएको थियो।
लेआउट भन्दा बढि केहि छैन काम सम्पादकीय डिजाइन, जुन ठाउँमा लिखित, दृश्य र केही अवस्थामा अडियोभिजुअल सामग्री व्यवस्थित गर्न जिम्मेवार हुन्छ। छापिएको मिडिया र इलेक्ट्रोनिक, जस्तै किताब, पत्रपत्रिका र पत्रिकाहरू।
त्यो हो, यो पृष्ठमा एक विशिष्ट स्थानमा तत्वहरूको वितरणसँग सम्बन्धित छ, जबकि सम्पादकीय डिजाइनले प्रक्रियाको फराकिलो चरणहरू समावेश गर्दछ, ग्राफिक परियोजनाबाट उत्पादन प्रक्रियाहरू जसलाई प्रीप्रेस (प्रिन्टिङको लागि तयारी), प्रेस (प्रिन्टिङ) र भनिन्छ। पोस्ट-प्रेस (समाप्त)। यद्यपि, सामान्यतया सम्पादकीय र पत्रकारिता गतिविधिको सम्पूर्ण ग्राफिक पक्ष को शब्द द्वारा चिनिन्छ लेआउट.
डिजाइन मा लेआउट
आधुनिक डिजाइनर (लेआउट डिजाइनर) हुनुपर्छ प्रशिक्षण र डिजाइनका सिद्धान्तहरूमा शिक्षा र लेआउटको कामलाई केवल आनन्दमा नछोड्ने। पृष्ठमा सूचनात्मक तत्वहरू क्रमबद्ध गर्नमा संलग्न विभिन्न संचार पक्षहरू बुझ्ने अभ्यासलाई सन्देशलाई अझ प्रभावकारी रूपमा व्यक्त गर्न व्यावसायिक ज्ञान र अनुभव चाहिन्छ।
वेबसाइट लेआउटको मुख्य विचारले पृष्ठको तत्वहरूको वितरण समावेश गर्दछ, त्यो हो, पाठहरू, छविहरू, लिङ्कहरू र ग्राफिक्सहरू व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थित। जसले यो गतिविधिलाई व्यावसायिक रूपमा प्रदर्शन गर्छ त्यो ग्राफिक डिजाइनर हो। वेबसाइट डिजाइन गर्नु भनेको पृष्ठको सबै तत्वहरूलाई निश्चित ढाँचा दिनु हो।
पक्कै पनि, हाम्रो जीवनको कुनै न कुनै बिन्दुमा, तपाईंले असीमित संख्यामा पत्रिका वा पत्रपत्रिकाहरू देख्नुभएको छ। यी ठूला पानाहरूमा लेखिएका सबै पाठहरू टेम्प्लेटहरू मार्फत निकालिएका छन्। यो सत्य हो कि InDesign सँग छविहरूको अगाडि पाठहरूको सही वितरणको लागि आवश्यक उपकरणहरू छन्, तर टेम्प्लेटहरूले जानकारीको विकास र सही पढाइमा पनि मद्दत गर्दछ।
अब तपाइँको लागि टेम्प्लेटहरू मध्ये एक प्राप्त गर्ने र तिनीहरूसँग तपाइँको पहिलो पाठहरू डिजाइन गर्न सुरु गर्ने समय हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » InDesign टेम्पलेट्स
धातु पोस्टर: तिनीहरू के हुन् र कहाँ किन्न?
ट्राइफोल्ड ब्रोशर मकअपहरू